स्कूल बन्द गर्ने–नगर्नेमा मन्त्रिपरिषद् अनिर्णित, स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयबीच विवाद बढ्यो - Narayanionline.com
मुलुकमा नयाँ ‘भेरियन्ट’ को कोरोना संक्रमण फैलिन थालेसँगै स्कूल बन्द गर्ने\_नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रालयबीच विवाद चुलिएको छ । स्कूल बन्द गर्ने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालबीच समझदारी बन्न नसकेपछि यसमा मन्त्रिपरिषद् समेत अनिर्णित बनेको छ ।
संक्रमणसँग सम्बन्धित विज्ञहरुको सुझावका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत बुधबार एक महिनाका लागि स्कूल बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द (सीसीएमसी) समक्ष पेस गरेको थियो ।
सीसीएमसीले उक्त सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याएकै दिन प्याब्सन, एनप्याब्सन, शिक्षक महासंघ, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलगायतले शिक्षा मन्त्रालयलाई तत्काल स्कूल बन्द नगर्न सुझाएका थिए । त्यसपछि स्थानीय तहसँग छलफल गर्न बाँकी नै रहेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले स्कूल बन्द गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा सहमति जनाएको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार खासगरी निजी स्कूल सञ्चालक र तीसँग सम्बन्धित छाता संगठनहरुले तत्काल स्कूल बन्द नगर्न मन्त्रालयलाई चर्को दबाब दिएका छन् । ती अधिकारीले भने, ‘तत्काल स्कूल बन्द गर्ने भन्ने निर्णयमा हामीले सहमति जनाउन सकेका छैनौँ । स्कूल बन्द नगर्न हामीमाथि ठूलो दबाब छ । कतिपयले धम्की पनि दिएका छन्। सरोकारवालासँगको हाम्रो छलफल पनि जारी राखेका छौँ ।’
यता प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले एकैचोटी विद्यालय बन्द गर्नु समस्याको समाधान नभएको निष्कर्ष आफूहरुको भएको दाबी गरे । उनले भने,‘वास्तवमै कोरोनाबाट जोगिने हो भने सबै क्षेत्र बन्द गर्नपर्छ । सरकार त्यसमा सफल हुन सक्छ ? नत्र स्कूल मात्रै बन्द गर भन्नु अव्यहारिक हो ।’
पुरीले कोरोनाबाट जोगिन उच्च सतर्कतका साथ स्कूल सञ्चालन गर्नु नै अहिलेका लागि उचित र व्यवहारिक भएको बताए । उनले भने,‘ कोरोनाबाट बच्ने हामीसँग यथेष्ठ मापदण्ड छन् । भौतिक दूरी कायम गर्ने, आलोपालो पढाउने, आधा–आधा गरेर विद्यार्थी ल्याउने, सरसफाइमा ध्यान दिने, शिक्षकहरुले खोप लगाउने, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने जस्ता मापदण्ड पूरा गरेमा पठपाठनमा अवरोध पुग्ने छैन ।’
त्यसका लागि सरकारले पनि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘हजारौँको भीड जम्मा गर्ने खेलकुद कार्यक्रम, बजारको भिडभाड, महल, रेस्टुरेन्ट, होटलको भीड, राजनीतिक कार्यक्रम, यातायातको क्षेत्रको भीडले कोरोना फैलाउँदैन ? त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ त ? भारतबाट आएकालाई निगरानी गरिएको छ ? के उनीहरुलाई क्वारेन्टिनमा बसालिएको छ ? के उनीहरुको परीक्षण गरिएको छ?,’ पुरीको प्रश्न छ ।
तर स्वास्थ्य मन्त्री हृदश त्रिपाठी स्कूल बन्द गर्न अत्यावश्यक भइसकेको दाबी गर्छन् । उनले भने,‘ नयाँ भेरियन्टको कोरोना संक्रमण फैलिसकेको छ । यसले बालबालिकालाई पनि संक्रमित बनाउन थालेको छ । स्कुल बन्द गर्नुपर्छ भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय दृढ छ । खासगरी शहरी क्षेत्रका स्कूलहरुले अनलाइन क्लास गरेको खण्डमा ७ ÷८ लाख विद्यार्थीको जीवन जोगिन्छ । अर्थात २० प्रशित जनसंख्या आउजाउ बन्द हुन्छ ।’
मन्त्री त्रिपाठीले नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरसको संक्रमण अझै बढ्ने सम्भावना रहेकाले बालबालिकालाई जोगाउने कर्तव्य स्कूलको भएको बताए । उनले भने,‘ हामीले गएको बुधबार नै स्कूल बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थियौँ । त्यसैअनुसार सीसीएमसी हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म हाम्रो स्कूल बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस पुगेको छ । त्यो कार्यान्वयन हुने हाम्रो आशा छ।’
मन्त्री त्रिपाठीले १८ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि हालसम्म खोपको विकास पनि नभएकाले पनि उनीहरुले जोगाउने आफूहरुको पहिलो कर्तव्य भएको बताए। शिक्षा मन्त्रालयले स्कूल बन्द गर्नुपर्ने निर्णय दिन नसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनः चैत ३१ गते स्कूल बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस सीसीएमसीसमक्ष पठाएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार बुधबार २४ घण्टामा ६०३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ती मध्ये २५४ जना मात्र काठमाडौँ उपत्यका छन् । कोरोना संक्रमणबाट ३ जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि गत चैत्र १४ गते संक्रमितको संख्या घटेर ४८ मा झरेको थियो। कोरोनाका दोस्रो लहर सुरु भएपछि विज्ञहरु पनि चिन्तित छन् ।
महाराजगञ्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक एवम् बालरोग विशृेषज्ञ डा. आरपी विच्छाले हाल धेरै बालबालिका प्रभावित हुन थालेको बताए । त्यसका लागि तत्काल स्कूल बन्द गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । तर स्कूल र अभिभावक मिलेर अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नबनाएमा पुनः बालबालिकामा अन्य किसिमका समस्याहरु देखिन सक्नेमा पनि विज्ञहरु उत्तिकै चिन्तित छन् ।
विच्छाले भने,‘ अब दिनकै १० देखि १८ हजार संक्रमित पुग्ने सम्भावना छ । यसअघि पाँच सय वा हजार देखिँदा अस्पतालमा उपचार गर्न गाह्रो परेको थियो । आईसीयु, भेन्टिलेटर, स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको अभाव भएको थियो।
यसबारे सबैको ध्यान जानुपर्छ’ उनका अनुसार यअसघि करिव तीन प्रतिशत बालबालिकालाई संक्रमण देखिएकोमा हाल आएर १७ प्रतिशतसम्म बालबालिका संक्रमण देखिएको छ । यसको मृत्युदर पनि उच्च भएको विच्छाको भनाइ छ ।
विच्छाले भने, ‘यसअघि लकडाउन गरेर बालबालिकालाई सुरक्षित राखिएको थियो । त्यसले गर्दा उनीहरु धेरै जोगिए । अहिले सबै क्षेत्र खुल्ला छ । लापरवाही छ । उनीहरुलाई बचाउने पहिलो उपाय स्कूल बन्द नै हो ।’
स्कूल बन्द गर्ने\_नगर्नेमा शिक्षा र स्वास्थ्यको एकै मत हुन नसकेका बेला आफ्ना छोराछोरीको स्वास्थ्य र अध्ययन दुवै विषयको चिन्ता अभिभावकामा गहिरो बन्दैछ ।
कतिपयले छोराछोरीलाई स्कूल पठाउन बन्द गरेका छन्। स्वयम्भू डेरा गरेर बस्ने सरस्वती लामाले आफ्ना छोराछोरीलाई स्कूल पठाउन बन्द गरेको बताइन् ।
उनले भनिन,‘ मेरा छोरा र छोरीलाई निजी विद्यालय पढाउँदै आएको हुँ । तर, बालबालिकामा नयाँ किसिमको कोरोना देखियो रे भन्ने सुनेपछि मैले उनीहरुलाई स्कूल जान दिएको छैन । तर, घरमा पनि कसरी राख्ने भन्ने चिन्ता छ । यसअघि लकडाउनका बेला उनीहरुलाई सम्हाल्न गाह्रो भएको थियो ।’
अहिले अभिभावक दोहोरो मारमा छन् । छोराछोरीको स्वास्थ्य बचाउन खोज्दा पढाई बिग्रने देखेका छन्। पढाईलाई निरन्तरता दिँदा स्वास्थ्य बिग्रने देखेका छन् । यस्तो गुनासो बढ्न थालेको छ । यसअघि स्कूल बन्द हुँदा कतिपय बालबालिकामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या समेत देखा परेको थियो ।
भक्तपुरको थिमी नगरपालिकाको एक विद्यालयमा ६ कक्षामा अध्ययन गर्ने ११ वर्षीय एक बालकको गत शनिबार कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएपछि उक्त स्कूल त्रास फैलिए पनि स्कूल भने बन्द गर्न सकेका छैनन् सञ्चालकले ।
यता कलंकीको कलंकीस्थित एलआरई स्कूलले मंगलबारदेखि आफ्नो स्कूलको पठनपाठन बन्द भएको सूचना टाँसेको छ । उसले कोरोना नियन्त्रणमा आफूहरुले सरकारलाई सहयोग गर्न चाहेको सूचना जारी गरेको हो ।
(देससञ्चारका लागि दिपा दाहालको रिपोर्ट)
चितवनको कालिकामा सडक निर्माणमा चरम लापरवाही, निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्कियो, केराको पातले पिच छोप्दै ठेकेदार
‘गो ब्याक इण्डिया’ भन्दै विद्यार्थी सङ्गठनको काठमाडौँमा पर्दशनी
अमेरिकन आइडलमा उपविजेता बने नेपाली युवा दिवेश
नारायणीले खतराको विन्दु पार गर्यो,उच्च सावधानी अपनाउन भरतपुर महानगरको आग्रह